Abafile kude imisindo le mashi lomshado, ngomlilo amaza futhi izinkanuko - futhi ezimpilweni imibhangqwana, kuningi osekushintshile. Akukho nomuzwa wenjabulo kulokubi abaseduze nawe futhi obakhonzile othandekayo, akajabuli isikhathi esichithwa, nokunye ukuphila ndawonye akajabuli. Kunalokho, umphefumulo zanqwabelana ukucasuka, futhi ngezinye izikhathi umcabango: "Indlela ukuba ubalekele umyeni wakhe?".
Lo mbono wandile ezinsukwini zethu futhi iphakamisa imibuzo ngekusasa eziningi ucansi fair. Uma - kuhlanganise nalezo zabesifazane lamantombazana, futhi nani ngezikhathi zaphazanyiswa ukucabanga ngekusasa, ngokukhethekile, ingenye ebaluleke kakhulu: ukuthi ukunquma ukuba ashiye umyeni wakhe, khona-ke lesi sihloko ukuphi. Niyophiwa iseluleko nesiqondiso sendlela ukunquma lesi sinyathelo futhi wenze sokuvalelisa kancane ubuhlungu.
Ngakho, ucabanga umbuzo "Bangaki ukuba ubalekele umyeni wakhe?". Ukuze uqalise iwukuba ngokuqinile ukuqonda umthetho owodwa zegolide: Ungavumi izinqumo ezinjalo ngamawala futhi ngokushesha. Ngenxa kusengozini - impilo yakho esikhathini esizayo. Njengoba ayezithathele isinqumo ukuphula-up, qiniseka ukuthi - a okuqinile futhi kuyiqiniso. Ukuze wenze lokhu, ungakwazi ukumaka zonke ezicini ezinhle zokuphila kwakho "ngaphambi nangemva", imali "uhlu ukusebenza". Ngokufanayo, ungakwazi ukumaka zonke izici ezinhle nezimbi umlingani wakho ekuphileni. Khona-ke kubalulekile ukuba ahlaziye futhi ahlole ebhaliwe. Uma Nokho, ngaphezu kwemiphumela "izici ezingezinhle" ukuhlala ndawonye hhayi uphelelwe isifiso ashiye umyeni wakhe, kumele anqume ngalolo lesi sinyathelo. Kwaphinda - isinyathelo kubhekwe.
Isinqumo sathathwa, kuhlaziywe nokuhlaziwa, luhlala ukuxazulula: kanjani ukuba ashiye umyeni wakhe? Thina ukuphendula ngegama elilodwa: amahle. Yebo, akuve kukuhle. Ukudabuka of ubudlelwano akufanele kube yisikhubekiso. Konke manje kwenziwe ngendlela ophucuzekile. Ukuze uqale ngemva kwalesi sinqumo yesehlukaniso kufanele wazise womshado. Ukungenzi abalungile. Khuluma kwesinqumo, ukunikeza izizathu, okuyinto, isimiso, bazibuyisa yokwehlukana. Nokho, ungakhohlwa mayelana nokuhloniphana. Nezixakaxaka, iconsi, inhlamba mutual kuleli cala - hhayi abasizi engcono. Isitatimende elula amaqiniso isimo esizolile, ngaphandle imizwa engadingekile futhi obsessions trifles ukuphila - yilokho okudingayo.
Ukulandela isaziso ngesinqumo sawo womshado akudingekile uyephuza ukulungiselela kwemibhalo isehlukaniso. Ukushesha wenza kanjalo, ithemba kancane uyonika umngane wakhe isixazululo kungenzeka inkinga. Akubalulekile ukufihla izenzo zabo kumyeni wakhe: ukulungiselela imibhalo nokubanikeza kuziphathimandla ezifanele ngokushesha ziyitshela. Uma umngane womshado wayelambe ukuqala ukungqubuzana, noma kunjalo, musa awe ukucunula yayo. Hlonipha wena kuye. Zama ukushiya ngesithunzi, kuyilapho sokulondoloza okungenani kancane friendly futhi enenhlonipho.
Khona-ke ukwenza yisinyathelo esibalulekile futhi sithathe izinqumo eziphusile (Yiqiniso, uma kungenzeka lokhu) - yokushintsha indawo yokuhlala, ukuze singathwesi senze isimo sishube kuya amacala ezehlukaniso. Zonke izinyathelo ezithathwe okuhlobene sokuvalelisa, umbiko womshado. Akubalulekile ukufihla lutho kusuka kuye. Lokhu kusebenza ngokuyinhloko emfundweni yezingane futhi ukuhlukaniswa kwempahla. Uma kuphakama izinkinga, xhumana nochwepheshe: abameli, notaries, abameli kanye nabanye.
Kufanele ucabange indlela ukuba ashiye umyeni wakhe? Khona-ke elinye icebiso kancane: uma umndeni wakho unezingane bakucabange ngabo. ukulimala engadingekile akudingeki. Ngaso sonke isikhathi khumbula ukuthi ingane yakho kufanele umama nobaba, ngisho noma bengahlali ndawonye. Lokhu kusho ukuthi kumelwe senze konke ukuqinisekisa ukuthi ingane (ren) uye walondoloza izikhundla nenhlonipho nothando umuntu othandekayo, ufuna ukubonana naye bese wabelana zijabule nalapho zidumele. Kuphela kuleli cala unembeza uyohlupha wena, futhi akudingeki ukuba kuvusa esidlule ...
Dome V-Dome - ngemva konyaka (ekusebenzeni)
Okungalapheki ukucinana kwemigudu yokuphefumula obstructive - ukwelashwa esigabeni oyingozi futhi ukuthethelelwa